Sihlala senza umoya wethu '' Ukuqamba okuletha intuthuko, Okusezingeni eliphakeme kakhulu lokuqinisekisa ukuziphilisa, Ukuphathwa kokukhuthaza inzuzo, Izikweletu eziheha amakhasimende ngengubo,,,, Samukela amakhasimende amasha namadala ukuthi asithinte ngocingo noma asithumele imibuzo ngeposi ubudlelwane bebhizinisi besikhathi esizayo kanye nokufeza impumelelo yomunye nomunye Sisebenzisa uhlelo oluphelele lokuphathwa kwekhwalithi ephezulu yesayensi, ikhwalithi ephezulu kanye nokholo oluphakeme, sithola idumela elikhulu futhi sithathe le mboni ngengubo, Inkampani yethu izonamathela ku- "Ikhwalithi yokuqala, ukuphelela unomphela, okugxile kubantu, ubuchwepheshe obusha" ifilosofi yebhizinisi. Umsebenzi onzima wokuqhubeka nokwenza inqubekela phambili, emisha embonini, yenza yonke imizamo ebhizinisini lokuqala. Sizama konke okusemandleni ethu ukwakha imodeli yokuphathwa kwesayensi, ukufunda ulwazi oluningi lobuchwepheshe, ukuthuthukisa imishini yokukhiqiza esezingeni eliphakeme kanye nenqubo yokukhiqiza, ukudala imikhiqizo yekhwalithi yokuqala, inani lentengo elifanele, insiza ephezulu, ukulethwa okusheshayo, ukukunika inani elisha.
Imikhono Ye-remobleble Hood Yezingane Nezintokazi
Lesi sitayela sibili okubili. Lo mklamo ulungele izingane zombili nezintokazi. Idizayini iyisigqoko esikhiphekayo nemikhono ngeyiloni uziphu.Thatha imikhono, ingashintshwa ivesti.